musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Culinary » Aya ndiwo e2021 Akanakisa Foodie Maguta muAmerica
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Health News • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Waini & Midzimu
Post-COVID-19, mamwe maresitorendi anoita kunge ari kuedza kudzosera vatengi kumashure nekupa yakakosha uye inonaka nguva yekusarudzika kwemaawa pamitengo yechokwadi yekutenga. MaFoodies pane bhajeti rakamanikana anofanirwa kutarisa iwo anofara maawa mamenyu pane mamwe maanofarira maresitorendi.
Anopfuura zana nemakumi masere emadhorobha makuru eUS akafananidzwa pamakumi maviri nepfumbamwe metric kiyi.
Iyo data yakamisikidzwa yakaturikidzana kubva mukukwanisika uye kuwanika kwemaresitoreti emhando yepamusoro kuenda kuzvikafu zvemitambo pamunhu wega kumakambani ekubika doro uye wineries pamunhu wega wega.
Inotungamirwa nekuzungunusa mirayiridzo yedenda, mamwe masisitendi akaendawo kunzvimbo dzekunze, dzinosanganisira madiki, marongero epedyo, uye odha isina kuonana.
NaOctober 16 kuve Chikafu chenyika Day nemitengo yezvitoro zvichikwira 5.4% pakati paChikunguru 2020 naChikunguru 2021, vaongorori vemaindasitiri nhasi vaburitsa mushumo wavo kumaGuta Emaguta Emahombekombe e2021 muAmerica, pamwe nekupindura nyanzvi.
Kuti uone akanakisa uye anodhura emuno foodie zviono, nyanzvi dzakafananidza anopfuura zana nemakumi masere emadhorobha makuru eUS pamakumi maviri nematanhatu metric. Iyo data yakamisikidzwa yakaturikidzana kubva mukukwanisika uye kuwanika kwemhando yepamusoro maresitorendi kuenda kuzvikafu zvemitambo pamunhu wega kumakambani ekubika doro uye wineries pamunhu wega wega.
Wepamusoro makumi maviri emaFoodie Maguta muAmerica
1. Portland, KANA 11. Los Angeles, CA
2.Orlando, FL 12. San Diego, CA
3. Miami, FL 13. Portland, INI
5 Austin, TX 15. Washington, DC
6. Sacramento, CA 16. St. Louis, MO
7. Denver, CO 17.Guru Rapids, MI
8.Las Vegas, NV 18.Chicago, IL
10. Tampa, FL 20.Houston, TX
Zvakanakisa vs. Zvakaipisisa
Orlando, Florida, ine gourmet inonyanya kukosha-ezvitoro zvekudya (pasikweya mudzi wevagari), 0.4529, inova ka19.4 zvakapetwa kupfuura muPearl City, Hawaii, iro guta rine vashoma pa0.0234.
Orlando, Florida, ine maresitorendi mazhinji (pasikweya midzi yevagari), 7.23, inova kakapetwa ka18.1 kupfuura muPearl City, Hawaii, iro guta rine vashoma pane 0.40.
Orlando, Florida, ine ice cream yakanyanya uye zvitoro zveiyogati echando (pasikweya midzi yevagari), 0.3566, inova nekanokwana makumi mashanu neshanu kupfuura muSouth Burlington, Vermont, iro guta rine vashoma pane 49.5.
Santa Rosa, California, ine chiyero chepamusoro chemaresitorendi akazara-ezvitoro kunzvimbo dzekutsanya-chikafu, 1.72, inove yakapetwa ka3.2 kupfuura muJackson, Mississippi, iro guta rine rakaderera pane 0.54.